RecalBox: The Definitive Retro Video Egwuregwu Platform | Akụrụngwa n'efu
Ọ bụrụ na ị na-achọ usoro zuru ezu iji melite ebe ntanetị na ebe ntụrụndụ gị, mgbe ahụ RecalBox bụ oru doro anya nke ịchọrọ. Sistemụ ị nwere ike iwunye na efere gị Ntu Pi ma nwee ọnụ ala nke ị ga-eji nọrọ ogologo oge nọrọ n'ime ụlọ ebe ị na-atụrụ ndụ ma ọ bụ ime ụlọ ezumike.
Ọ bụrụ na ị gụọ Hwlibre, ị kwesịrị ịmaraworị nke ahụ enwere ọtụtụ ohere n'ihi na ochie gaminggba Cha Cha, si ụfọdụ mmiri na-ezukọ gị Arcade igwe arụrụ n'ụlọ, ọbụna ọtụtụ ndị ọzọ uzo ozo na RecalBox n'onwe ya maka bọọdụ SBC gị. Ihe niile bụ iji weghachite egwuregwu vidio ndị ochie nke igwe ochie sitere na Nintendo, Atari, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ezigbo ọla na-anaghị adọta ndị na-egwu egwuregwu ...
1 Gịnị bụ RecalBox?
2 Wụnye RecalBox na Raspberry Pi
2.1 Ihe dị mkpa
2.2 Wụnye RecalBox na Raspberry Pi gị
2.3 Hazie RecalBox
Gịnị bụ RecalBox?
RecalBox bụ usoro ihe eji akwụ ụgwọ ma na-emeghe emeghe nke na - enye gị ohere iulateomi ọnụ ọgụgụ buru ibu nke kọmputa ochie na njikwa. Uzo a nwere otutu egwuregwu vidio nke ị nwere ike ugbu a na-ekele ekele maka ikpo okwu a. E wezụga nke ahụ, a pụrụ iche RecalBox na sistemụ ndị ọzọ n'ihi na ọ na-enyekwa ọtụtụ ọrụ ntanetị aka.
Ekele diri ndi agbakwunyere ngwugwu maka multimedia ị ga-enwe ike ike gị ukwuu mediacenter ọnụ na a retrogaming ojii. Ihe niile na otu, centrally na mfe. Enweghị mkpa iji ọtụtụ sistemụ na buut ya na otu ma ọ bụ nke ọzọ dị ka NOOBS.
Na mgbakwunye na ịbụ nke zuru ezu, ọ dịkwa na-emelite mgbe niile ekele ya na-arụsi ọrụ ike obodo nke mmepe. Ya mere, ị ga-enwe ihe ngwọta maka chinchi, yana mmelite na-aga n'ihu nke a na-enwe ekele maka ya.
Maka ihe niile a, a na-ahụta RecalBox otu n'ime nyiwe kachasị mma maka ntụrụndụ…
Ibudata - RecalBox
Otu n’ime nnukwu ihe ịga n’ihu na ọrụ a bụ mbata nke mbipute RecalBox 6.0. Nke a chere nnukwu mgbanwe na mmepe nke RecalBox, nke ahụ abụrụla ihe ndabere maka mbipụta ndị a na - adịbeghị anya dịka mbipụta mbipute RecalBox 6.1.1 nke kachasị dị ugbu a n'oge edere isiokwu a.
RecalBox OS bu isi ihe GNU / Linux nkesa Kachasị maka multimedia na retrograming dị ka m kwuworo. Emeputara ya ka eji ya na Raspberry Pi na mbu, rutekwa Odroid na x86 sistemu nke bu 4.1, na obuna akpa.
Ihe oru ngo sitere na French ruru otu n’ime ihe kachasi ike na 6.x a, ebe o nweela ike i emomi otu narị njikwa na sistemu site na piFBA na RetroArch, yana EmulationStation2.
Gụnyere Kodi dị ike maka multimedia, na uru niile nke a pụtara. O nwekwara eserese eserese ya maka ịnyagharị na njikwa dị mfe, na ọrụ ọma ya mere ka Raspberry Pi Foundation tụlee ya maka nsonye na NOOBS ma nwekwaa ndị mmepe ndị ọzọ jiri ya mere ntọala maka ndụdụ a kpọrọ Batocera.linux (2016).
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ndakọrịta na egwuregwu vidio, nke ahụ bụ, olee nyiwe ọ nwere ike i emomi iji gbaa egwuregwu vidiyo niile dakọtara, mgbe ahụ ị kwesịrị ịma ndepụta zuru ezu nke ejiri RecalBox kwadebe:
Egwuregwu nwa agba
CD dị elu
Lynx nke Atari
Agba NeoGeo n'akpa uwe
Sinclair ZX ụdịdị dị iche iche
Na usoro ndị ọzọ ...
Wụnye RecalBox na Raspberry Pi
Iji nwee ike ịnụ ụtọ RecalBox gị na-ejighị PC gị maka ya, ị nwere ike iji kọọdụ SBC mee ya dị ọnụ ala karịa Raspberry Pi. Ya mere, maka ole na ole euro iri i nwere ike nwee usoro zuru ezu iji bulie ntụrụndụ gị na ụlọ ọrụ mgbasa ozi, na-ejikọ efere a na TV n'ime ime ụlọ gị ...
Kedu ịkwesịrị ịzụta ịtọlite ​​arcade gị (ọ bụrụ na ịnweghị ya) bụ ihe ndị a:
Utu Pi 3 (O di nwute, nsụgharị ugbu a agbakwunyebeghị nkwado maka Pi 4)
Kaadi ebe nchekwa microSD dịkarịa ala 16GB
Ihe nkwụnye ọkụ site na USB maka ike 2.5A na 5v.
HDMI eriri jikọọ ya na TV ma ọ bụ na ihuenyo.
Njikwa maka egwuregwu vidiyo dakọtara ma ọ bụ ụfọdụ ochie dị.
Utu Pi ma ọ bụ ụlọ obibi (nhọrọ).
Site n'ụzọ, ha na-erekwa ngwa zuru ezu dị ka ọwụwa anyanwụ Aukru inwe a igbe, heatsink na ike nkwụnye maka gị Pi ...
Wụnye RecalBox na Raspberry Pi gị
Ozugbo i nwechara ihe niile, ihe ọzọ ị ga-eme bụ wụnye RecalBox na bọọdụ Rasberi Pi gị site na isoro usoro ndị a:
Budata RecalBox site na gọọmentị webụsaịtị. Jide n'aka ịhọrọ ihe oyiyi kwesịrị ekwesị maka ụdị efere gị. Ọ bụrụ na abịakọrọ .img na .zip ị ga-ewepụ ya.
Ugbu a ị ga-eji Etcher iji gbanye microSD ma wụnye RecalBox na ya. Nwere ike ịgbaso ndị a nzọụkwụ m gosipụtara gị n'isiokwu ọzọ.
Ugbu a, tinye kaadị microSD n'ime oghere nke Raspberry Pi gị ma, ọ bụrụ na ị jikọọ eriri niile, ị nwere ike ịgbanye ya iji malite ịmalite ...
Dị mfe dị ka nke ahụ!
Nhazi mgbe buut agaghị ewe oge. Ọ dị ezigbo mfe site na ntọala sistemụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere ihe njikwa USB, ị nwere ike jikọọ ya na ọ ga-amalite ọrụ ozugbo ọ bụrụ na akwado ya. Bụrụ na nke ịbụ wireless, ị kwesịrị ị na-eji a bluetooth dongle maka njikọ ya na-eche ka ọ mara ya… Ọ dịghị ukwuu ihe omimi.
Ọ bụrụ na ịchọrọ nọgide na-edozi nkọwa ndị ọzọ site na Kodi, ma obu site na RecalBox sistemụ n'onwe ya, inwere onwe gi imeghari ya ma ichoro choro gi ...
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata etu tinye ROM nke egwuregwu vidio gị, Akọwaworị m ihe ke ibuotikọ emi. Enwere m olileanya na ị ga-ekpori ndụ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » RecalBox: usoro ikpocha egwuregwu retro
ADS1115: analọg-dijitalụ ihe ntụgharị maka Arduino